Wararka - Hangzhou Jiande Enterprise waxay si deg deg ah dib ugu yeertay in ka badan 100 shaqaale ah
NOOCA NOOCA MISKIGA
MASKAXDA NOOCA MASKAXDA
QORSHE SHAQEYAHA RESPIRATOR
Taariikhda Maska Maska
Hangzhou Jiande Enterprise waxay si deg deg ah dib ugu yeertay in ka badan 100 shaqaale ah
Hangzhou Jiande Enterprise waxay si deg deg ah dib ugu yeertay in ka badan 100 shaqaale ah, waxayna sadex jibaarantay mushaarkooda si loogu dhiiri galiyo saacadaha dheeriga ah in la sameeyo waji duub!
Markii uu ka dilaacay cudurka oof-wareenka cusub ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' ee magaalada Wuhan, soo saarista iyo keenista waji duubku waxay noqdeen mawduuc ay dadku aad uga walaacsan yihiin.
Maaddaama ay tahay shirkad hormuud u ah R&D iyo soo saarista qalabka difaaca neefsashada oo leh saamiga suuqa gudaha ee 35%, Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. waxay si dhakhso leh uga jawaabtay baahida suuqa ee kacsan ee ka imanaya cudurka cusub ee cudurka 'coronavirus pneumonia' oo isla markiiba loogu yeeray shaqaalaha warshadda si loo diyaariyo Inta lagu jiro Sannadka Cusub ee Shiinaha, maalin badhkeed oo keliya ayaa ka maqan Habeenka Sannadka Cusub, waqtiga intiisa kalena si buuxda ayaa loo dammaanad qaadayaa wax soo saar.
Asal ahaan, in ka badan 120 shaqaale oo ka soo laabtay fasaxii fasaxa 18-kii Janaayo, ka dib markay heleen ogeysiiska waqtiga dheeriga ah, waxay iska dhaafeen shaqadoodii guriga, isla markiiba waxay ku noqdeen meelihii ay joogeen, waxayna naftooda u hureen shaqada hubinta keenista waji-furka.
Aqoon isweydaarsiga wax soosaarka ayaa si xawli ah ku socday, shaqaaluhuna waxay fadhiisteen miiska qalliinka iyaga oo si xamaasad leh u soo yaacaya si ay u yeeshaan waji xidhis. Kadib markay shaqaaluhu dhammeeyeen alxanka Xiinka ee maaskarada difaaca, qof ayaa isla markiiba qaatay maaskarada.
“Maanta, tirada guud ee amarada warshadda ayaa kor u dhaaftay in ka badan 80 milyan, saadka ayaa la joojiyay. Mushaharka oo saddex jibaarmay, waxaan u wici doonnaa dhammaan shaqaalaha hareeraha ah ee lala soo xiriiri karo oo aan isku dayi doono inta ugu fiican ee aan ku dhammeyn karno. Amarada, waagii hore ee warshaddii wajiyadu ay sidooda ahaadeen. ” Lin Yanfeng, oo ah maareeyaha guud ee Xisbiga Xisbiga laanta Waqooyiga Kuuriya iyo maaskarada Mareykanka ee Jiande City, ayaa yiri waxaan nahay unug kayd qaran oo gurmad ah, waana in danta dalka laga hormariyo.
Shirkadda Chaomei waxay mar hawlo muhiim ah u qabatay dalka intii lagu jiray xilligii SARS-ka, iyadoo siineysay waji-furka SARS-ka ee loogu talagalay Isbitaalka Beijing Xiaotangshan, Isbitaalka Ditan, Isbitaalka Cudurrada faafa ee Beijing, Waaxda Guud ee Saadka ee Ciidanka Xoreynta Dadka Shiinaha iyo Xarunta Keydka Waxyaabaha Degdegga ah.
Sida laga soo xigtay warbixinnada, waxaa la filayaa in laga bilaabo 22-ka Janaayo ilaa maalinta afraad ee Sannadka Cusub ee Lunar, shirkaddu ay dammaanad-qaadayso soo-saar maalinle ah oo ah 30,000 oo waji ah, 50,000 oo soo-saar maalinle ah laga bilaabo afraad ilaa maalinta siddeedaad, iyo in ka badan 100,000 oo soo-saar maalinle ah ka dib maalintii siddeedaad.
Tuulada Shangshan, Yangcunqiao Town, Jiande City, Hangzhou, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
THE Shirkadda Shirkadda Mas mask ee Taariikhda